वर्णन मिडिया पृथ्वीनारायण शाहले केशव द्वारेको उखु चोरे भनी बैरीले जस्तो टुइट किन गरियो ? - वर्णन मिडिया
पृथ्वीनारायण शाहले केशव द्वारेको उखु चोरे भनी बैरीले जस्तो टुइट किन गरियो ?
०२-माघ-२०७६ | ०५:४४:३४ pm
आज पृथ्वीनरायण शाहको मृत्युभएको २४४ बर्ष १ दिन भयो । उनको देविघाटमा शरीरमा कुनै प्रकारले घाउ भएर मृत्यु भएको थियो । उनले देश दिए त्यही देशमा बाबुराम प्रधामन्त्री बनेर मुस्ताङ गाडीमा ढल्कदै हिडेका थिए ।
नेपाल अहिले भन्दा ठूलो हुन पनि सक्थ्यो सानो हुन पनि सक्थ्यो नहुन पनि सक्थ्यो तर पृथ्वी नारायण शाह नभएको भए अहिलेका कुनै पनि न त व्यक्ति राजा हुन्थे न त प्रधानमन्त्री वा मन्त्री । अरु कसैले एकिकरण गर्दो हो तर तर राजधानी काठमाण्डौ मै बनाउने भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्थ्यो ।
एउटा व्यक्तिले गर्दा १० हजार जनाको भविश्य परिवर्तन हुन्छ । पुथ्वी नारायण शाहले एकिकरण नगरेको भए । अहिले उनलाई तथा नाम लेख्ने बाबुराम प्रधानमन्त्री त के गुमनाम व्यक्ति हुने थिए । कोही पनि शत्तामा काम वा बुद्धिले पुग्ने होइन कोइन्सिडेन्टले पुग्ने हो । बुद्धिले माथि पुगिने भए । हजार बस्तुको नाम नम्बर अनुसार घोक्न सिकाउनेहरु अहिलेसम्म १० देशका प्रधानमन्त्री बन्ने थिए ।
अहिलेकै मन्त्री परिषदमा ओली ठाउँमा अर्को मानिस हुन्छ भने अहिलेका ९० प्रतिशत मन्त्री फेरिन्छन् ।
भन्न खोजेको के हो भने एकिकरण पृथुवी नारायणले गरेका हुन् र उनलाई बिर्सनु पनि हुँदैन । तर भुतपुर्व एक प्रधानमन्त्री उनलाई लगभग सामान्य मानिसलाई जस्तो व्यवहार गर्नु पर्छ भनी पुस २७ गते एक टुइट गरेका छन् । यो ज्यादै दुःख लाग्दो बिषय हो । बाबुरामले एक टुइटमा यस्तो भनिएको छ ।
राम्रै भयोत्यही रूपमा उनलाई सम्झे पुग्छधेरै धूपवत्ति गरिरहनुपर्दैनदरौंदीमा खेल्दा भोकाएर केशव द्वारेको उखु चोर्नवाध्य पृनाको आत्मालाई खुशीपार्ने हो भने उनको जन्मदिनमा छुट्टी हैन १२घण्टा काम गरेर देशलाई धनी बनाऊँअर्कोतिर त्यसवेलाको चेतनामा संघीयराज्य सम्भव थिएन गाली पनि नगरौं ।
उनले अरु टुइट पनि गरेका छन् तर उनले पृथ्वी नारायणलाई सामान्य व्यक्ति मान्नु पर्ने राय राखेका छन् ।
उनको अल्प दृष्टि हो वा दुर दृष्टि त्यो थाहा भएन तर वास्तवमा इतिहास जसले देश बनाउँदछ त्यो स्तुत्य हुनु पर्छ । जसले राम्रो काम गरेको छ उसलाई जनताले सम्झिन्छन् धुप बत्ति बाल्दछन् यसमा बाबुराम ज्यूले टाउको किन दुखाउनु पर्यो ।
पृथ्वी नारायण पछि नेपालमा कोही पनि एकिरण भाव भएको मानिस राजा वा प्रधानमन्त्री बन्न सकेको छैन । उनले त्यतिबेला यो काम नगरेको भए जनता त आखिर जनता नै रहने थियो बाबुरामको प्रधानमन्त्रीत्व के हुन्थ्यो होला ? अलि गहिरिएर सोच्नु होस त ।
त्यसैले यसरी जनताई र सानो बच्चा हरुलाई भ्रम सृजना हुने गरी देशको बैरीले पनि गर्न नमिल्ने टुइट नगर्नु राम्रो हुन्छ ।
अनि अरु दिन काम चोर झै पाहार तापेर बस्नेले पनि पनि पुष २७ गते १२ घण्टा काम गरेर कहाँ लैजान चाहान्छन् जनमानस को चेतलाई बाबुरामले ।
हुनतः गोरखामा जन्मेका बाबुरामलाई जिल्लाको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेकोमा गर्व गर्न लायक बनाएनन् पृथ्वी नारायणले त्यसैले यसरी शब्द मार्फत सुक्क सुक्क गरेका होलान् ।
यहि झोकमा केशव द्वारेकोमा पृनाले उखु चोरेको आरोपमा मरणोपरान्त प्रहरी कार्यालयमा एफआइआर दर्ता गर्न सक्छन् ।
इतिहासको गरिमा र गर्व मेटेर आफ्नो गुणगान लेखाउन देखाउन सवै उद्यत हुन्छन् तर दुर्भाग्य जति जति पृथ्वी नारायणको इतिहास मेट्ने काम गरिन्छ त्यति नै तीव्रताका साथ उनलाई स्मरण गर्नेको संख्या बढ्दै छ ।
प्रत्येक पुस२७आउँदा पृथ्वीनारायण शाहलाई एकथरिले देवत्वकरण र अर्काथरिले दानवीकरण गर्ने लिगलिगे दौड हुनु शोभनीय भएन!कसैको पनि मूल्याँकन ऐतिहासिक सापेक्षतामा गरिनुपर्छ!१८औं शताब्दीको चेतनामा उनले ग़रीब गोरखा राज्यविस्तार गरेका हुन् जुन प्रकारान्तरले वर्तमान नेपालराज्य बन्न पुग्यो!.२